Uhlobo lwe-Repoman 1.3 luyatholakala | Kusuka kuLinux
U-Eddy Ernesto del Valle Pino umbhali we I-repoman_cli Ungithumele inguqulo 1.3 yalombhalo omuhle owenziwe ku- Python ukwakha amakhosombe wesiko ku- Ubuntu/Debian bese ubayisa ekhaya.
I-repoman_cli umbhalo osebenza ngezansi I-PSC (Isikhungo Sesoftware Ephathekayo) zazo osekuvele sikhulume phambilini. Kule nguqulo umbhali ungitshela ukuthi uyisebenzisile kahle ikhodi ukuze idle izinsiza ezimbalwa lapho kuxazululwa ukuncika, ngoba phambilini bekudla abanye I-100 Mb. Izinguquko beziyilokhu okulandelayo:
Ukwenza kahle kwekhodi.
Ukunciphisa ukusetshenziswa kwememori.
Isivinini esikhuphukile lapho uxazulula ukuncika kwephakeji.
Iskripthi senziwa kukhonsoli njengoba kunengqondo futhi ungabona ukuthi ungayisebenzisa kanjani ngokubeka:
Kumele ngicacise ukuthi le nguqulo ye I-repoman ayihambelani ne- I-PSC, ngoba leyo eyasatshalaliswa nayo yayinento eyodwa esusa ukuguquguquka futhi lokho ukuthi yakha indawo yokugcina lapho uhlelo ngokwalo lwalukhona.
Ungayilanda kusuka ku- lesi sixhumanisi.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Aplicaciones » Uhlobo lwe-Repoman 1.3 luyatholakala
Isixhumanisi osibekile asilungile i-elav.
Ngiyabonga ngokuyibika, manje ngiyayilungisa 😀
Angikwazi ukuyilanda, uma othile ngingakucela ukuthi ungithumele yona fdgonzalez@uci.cu
Hmmm, kuhle, kungahle kungisize ngolunye usuku 🙂
Uxolo ukuvuselela itimu yakudala kepha unganginika isixhumanisi sokuyilanda? (Isixhumanisi sokulanda noma leyo ekuwebhu ayisebenzeli mina) Futhi bengifuna nokwazi ukuthi ungalanda yini inqolobane enokwakhiwa okuhlukile kunaleyo esemshinini ene-Intanethi
Iqiniso ... I-AptonCD iyisabekayo kubasebenzisi abasha (futhi ekufakweni kwayo udinga i-inthanethi ngasikhathi esithile, anginayo i-intanethi) noma olunye uhlelo lohlobo olufanayo kepha lusasebenza
PS: ngiyaxolisa ngokwenza necromancy
Ngizamile ukulanda i-repoman kusixhumanisi futhi ayiveli, ngingaluthola kanjani lolu hlelo? Ngiyabonga kusengaphambili
Nge-Terminal: Ukwenza ngcono ukubonakala kwekhonsoli (Kubuyekezwe)